Koorsada shaxanka oo leh saldhigga guud - Geofumadas
Ogast, 2011 AutoCAD-AutoDesk, GPS / Qalabka, topografia
Maanta maanta waxaan bilaabeynaa koorso aan rajeyneyno in aan qaadno farsamoyaqaannada cadawga ah ee dawladaha hoose iyo nasiib darro si ay u dhammaystiraan tababarkooda, ilaa hadda sababaha ugu muhiimsan waxay ahayd kaliya cadastral. Ujeedadu waxay tahay in ay bixiyaan adeegyadooda si ay u helaan macluumaad ay muhiim u tahay naqshadeynta mashaariicda kaabayaasha.
Koorasku waa mid xoogan saddex maalmood, maalmaha fasaxa ah ee ku lugleeyaha qaar ka mid ah injineernimada mawduuca iyo ka qaybgalayaasha 25 ee joojiyay safaradooda guryahooda si ay uga qaybqaataan dhacdada. Sidan maanta waxaan sameyn doonaa laba dhacdo kale, sababtoo ah tan ugu horreysa ayaa loogu talagalay kuwa horay u isticmaalay saldhigga koowaad ee hoos yimaada cadawga, inkastoo ay sidoo kale ku dhuunteen dhowr qof oo u adeegsanaya inay u isticmaalaan teodoolitiga caadiga ah.
Waayo-aragnimadu waa wax aad u xiiso badan, marka la gudbinayo waxay cadeeyn doontaa qaababka cusub Sokkia 630 RX, taas oo horay ula timid laser burbur iyo qalab si loo soo dajiyo xogta USB iyo kaararka SD. Sidoo kale aragtaan waxaas oo xiiso leh isku dhafka ah injineerada sokeeye khibrad leh, farsamo dhul la dheer-shixnadda iyo ardayda kaabiga ku rajo haddii si dhab ah wax ka barato shahaado jaamicadeed oo ku xiran horumarka tererritorial ah.
Lix bilood kadib waxaa wanaagsan in aad aragto oo dhan khayraadka aadanaha in kor u dhigaysa kooxdeyda, qalabeeyay hal meel si ay ula wadaagaan wax-aragnimadooda iyo lahaanshaha file keenaya fogaanshaha in xidhiidh iyo masayrka xirfadeed. Nasiib darro sanadka soo socda waxaan ku qasbanaanayaa inaan kooxdani xalliyo.
Ku soo noqoshada koorsada, maalinta koowaad, subaxdii waxaa jirey dib-u-fiirin goobta ah si loo xaqiijiyo in dhammaan saldhigyada yimaadaa ay muuqaal yihiin, iyo in ka qaybgalayaashu helaan jawaab-celin ku saabsan isticmaalka qalabka. Galabnimadu waxa ay ka hadlaysaa mawduuca asaasiga ah ee kaabayaasha, ka faa'iideysiga dadka si ay ula falgalaan dabeecadda horumarinta waarta iyo dhinacyada aasaasiga ah ee sahamiyeyaashu waa inay ogaadaan; asal ahaan waxa ay yihiin waddooyinka, nidaamyada bullaacadaha iyo biyo la cabbo.
Kadib maalinta labaad, Sabtida waxaa jiri doona dhaqanka beeraha si aad u qaadid qayb ka mid ah wadada iyo maalinta saddexaad ee khadka wadista. Sida qalab digitif ah, waxaa loo isticmaali doonaa Khariidadda Caalamiga ah ujeedooyin ah shows Qaabaynta iftiinka iyo Madaniga CAD Maalintii saddexaad, laakiin kaliya gooladaha heerka nivel.Con waqtiga, commonwealths badbaadin kartaa lacag aad u badan, taas oo inta badan waa warbixin hordhac ah oo counterparty waayo, samaynta qaabka mashruuca ee hay'adaha iskaashiga ah ee macnaha guud. Sidoo kale aqoonta la ururiyay ee maanta waxay ka dhigi doontaa khayraadkani inuu furo fursadaha fursadaha kaliya ee ay u furi karaan noloshooda. Goobta: Qaar ka mid ah lumay -ma aha wax badan- laga bilaabo Honduras.
Dhab ahaantii, waxaan ugu dambeyntii awooday inaan ka takhaluso laptop oo aan maamulo kaliya Blog
Post Next Genius iyo IngenuityNext »
9 Jawaab ah "Koorso" topography "oo leh saldhigga guud"
Sidee ayaad u kobcineysaa koorsadan 2017
Marka uu bilaabo
Daniel Alarcpon isagu wuxuu leeyahay:
Salaan wanaagsan waxaan xiiseynayaa koorsadan, waxay ku jiri doontaa 2017 oo mar kale la bari doono
halkaa, jadwallada, mawduucyada, iyo kharashka.
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay horumarinta kooraskan 2011
Hello subax wanaagsan waxaan doonayaa in aan ogaado oo ku saabsan waqtiba waqtiga ka TOPOGRAFIA, qiimaha, iyo ugu dambayntii waxaan ahay qabiir lagu samayn karaa mahadsan baayacmushtarka
Eliseo isagu wuxuu leeyahay:
sida ugu macquulsan ee looyaqaano sidee loo ilaalin karaa xarumaha wadarta guud ee sokkia 630
oswaldo galarza lerma isagu wuxuu leeyahay:
Maxaa dhacaya haddii qof uu leeyahay aqoonta muuqaalka guud ee dhulka iyo rabto in wax aan sidoo kale beddelan karo fikradaha waxaan ahay arday dugsiga xirfadda ee sahan injineernimada iyo sahan oo ka mid ah buuralayda jaamacadda qaranka ee Gobolka Puno ee dalka Peru kanna waa email galeos_waldo@hotmail.com iga tag farriin
Danilo Lemus isagu wuxuu leeyahay:
Ahhhh ... iyo habka 630 RX uma baahna inay la dagaalamaan wareejinta wareejinta ... taasi oo mararka qaarkood aqoonsanaysa mararka qaarkoodna maahan.
Habkani waa horumar kale
Marcel isagu wuxuu leeyahay:
xiiso leh. Maalintii ay jidka u socotay ma ahan inay arkaan kubada cagta